Vaovao - Fitaovana
Ao amin'ny P&Q, dia takatsika fa ny fitaovana avo lenta, noforonina tsara dia miteraka vokatra avo lenta, fampiasana fitaovana mahomby ary androm-piainana lava kokoa. Ho fanampin'izay, ny programa fikojakojana fitaovana mavitrika P & Q dia miantoka ny fahombiazan'ny asa tsara, ny fahamendrehana ary ny faharetana.
Raha mikasika ny fitaovana dia mampiasa fomba vaovao sy heverina isaky ny mandeha izahay.
Na manome outsourcing fananganana fitaovana isika, fanamboarana fitaovana ao an-trano na koa fampifanarahana fitaovana efa misy izay tsy mandeha araka ny tokony ho izy, P&Q dia hanao izay hahazoana antoka fa manana fitaovana mety amin'ilay asa ianao.
● Lasitra vy ao an-trano sy fanamboarana fitaovana
● Fananganana fitaovana fanariana fanerena tosika ao an-trano
● Fitaovana fananganana outsourcing sy fitantanana
● Fanovana sy fanamboarana fitaovana efa misy
● Fikojakojana sy fanombanana fitaovana
● Jigs sy fitaovana
---- Fitaovana fametahana milina CNC
---- Jig sy fametahana manokana momba ny vokatra
---- Jigs fitsapana ny fanerena sy fanamarinana
Fitaovana mandritra ny androm-piainanafiantohana
P&Q dia manome ny fitaovan'ny mpanjifa miaraka amin'ny antoka maharitra. Vantany vao mandoa ny mpanjifa, ny P&Q dia ho tompon'andraikitra amin'ny fitazonana ny vidin'ny fitaovana sy ny fanamboarana rehetra.
Fitaovana P&Q miaraka amina fiainana 100, 000 mahazatra. Raha mihoatra ny 100 000 000 ny kaomandy. P&Q dia hanao fitaovana vaovao rehefa ilaina ary tsy handoa saram-pitaovana amin'ny mpanjifa.
Ny elanelam-pifidianana P & Q dia be dia be; mamorona vokatra manomboka amin'ny 7 grama ka hatramin'ny 30 Kilograms. Ny elanelam-pandehanay dia mampiasa milina famonoana fanerena avo lenta, milina misintona ambany, bobongolo naidina tanan-tanana ary ny zavatra rehetra eo anelanelany.
Manolotra tanjaka mahery izahay, maty mafy ny vy ary mafy ihany koa ny manipy fasika. Ny elanelam-pandehananay dia mamela ny filaharana marina sy azo averina miverina, miaraka amin'ny fahafahantsika mamela ireo mpandefa talenta tsika hampiditra ny kanton'izy ireo isaky ny casting. Raha tsorina dia hoe: raha ilaina ny fandefasana azy dia manana ny fahaizana sy ny teknolojia hanariana azy isika. P&Q dia safidy tsara ho an'ny safidinao.